Jadwalka khidmadda Khadka BISIM iyo Hawlgallada Xubnaha | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirJadwalka khidmadda Khadka BISIM iyo Howlaha Xubnaha
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY 0
lacag-bixinnada iyo macaamilidda xubnaha
Jadwalka khidmadda BİSİM Stations iyo Macaamilada Macaamilada: BISİM waxay kordhineysaa xiisaha maalin walba ee nidaamka baaskiilka, kaas oo loo adeegsaday İzmir Metropolitan Municipal ee 18 Janaayo 2014 oo ka dhigtay qiyaastii xNUMX milyan oo kiro ah ilaa iyo hadda.
Si loo dhiiri geliyo isticmaalka baaskiillada si gaadiid looga isticmaalo isticmaalka baaskiiladaha madadaalada iyo ujeeddooyinka isboortiga, Degmooyinka Magaalada Izmir; BİSİM waxay higsaneysaa inay ku ballaariso Nidaamka Bikeega Biyodhaafka ah ee 'Smart Bike Sharing' ee dhammaan İzmir, sidaas darteedna ay ku siinayaan gaadiid caafimaad iyo jawi wanaagsan dhammaan bay jecel yihiin baaskiillada.
Nidaamka Wadaagista smart ee Baaskiilka, kuwa jecel baaskiillada looma baahna inay wataan baaskiillada, waxay ka kireysan karaan baaskiiladaha xarun kasta oo BISIM ah waxayna uga tegi karaan xarun kasta oo BISIM ah.
BİSİM Sidee loo kireystaa?
Kirada BISIM oo leh Kaadhka Xubnaha (Si dhakhso leh oo fudud)
Markuu nalka cagaaran bilaabo inuu bililiqo, hore u qaad baaskiilkaaga ka dibna dib u jiid. Macluumaadka ku saabsan adeegsiga waxaa loo diraa taleefankaaga mobiilka iyadoo loo marayo farriin qoraal ah. Ma jiro wax xannibaya oo ka qaadanaya kaarka xubinnimada.
Sideen ku heli karaa kaadhkayga xubinnimada ee BISIM?
Adoo ku uruurinaya lacag qodobbada xubinta ee lagu shaaciyey menu-ka weyn,
Adigoo xubin ka ah websaydhka waxaad ka heli kartaa kaarka deynta qadka. Kaarkaaga waxaa laguugu soo diri doonaa cinwaankaaga gudahooda 2-4 maalmood.
Sideen ugu amaahdaa kaarka xubinkayga?
1. Qodobbada Xubnaha
Adigoo galaya bartayada, waxaad ka soo dejisan kartaa internetka kaarka deynta.
2. Kirada BISIM oo leh Kaarka amaahda
Tag qaybta baarkinka adoo wata lambarka sirta ah ee aad heshay adoo raacaya tilmaamaha ku yaal shaashadda kiosk adigoon u baahan xubin xubin. Qaybta baarkinka halkaasoo baaskiilku leeyahay nal cagaaran oo joogto ah, marka hore riix batoonka, ka dibna geli lambarka sirta ah oo mar labaad riix batoonka gelitaanka.
Waa maxay xannibaadda 30 tl?
Kani maahan deebaaji aan helno. Iyadoo la raacayo nidaamka bangiyada, 30 TL halkii baaskiil ayaa laga xayiray kaarkaaga deynta. Maalinta ku xigta ka dib kiraysiga bushkuleetiga, xayiraadda ayaa laga saarayaa 23.00. Waqtigaan waad sii kireysan kartaa mar kale iyo mar kale adigoon u baahnayn xirmo kale. Haddii xannibku sii socon waayo waqtigii loo cayimay, la xiriir bangiga uu kaarkaaga deynta leeyahay.
3. Kirada BISIM ee leh Izmirimkart
Si aad ugu adeegsato Izmirimkart-kaaga nidaamka kireysiga Bisim, waa inaad marka hore kaarkaaga dhaqaajiso kaarka xubinteena ee ku yaal Konak Ferry Port. Si tan loo sameeyo, waa inaad ka weynaataa da'da 18 oo aad haysataa Aqoonsigaaga.
Waa inaad ugu yaraan isku dheelitirka 20 TL ku leedahay Izmirimkart-kaaga. Markii aad shaqeyneyso kaarkaaga, dheelitirkaaga 20 TL waxaa loo wareejiyaa koontada Izmirimkart Bisim. Markaa ujrada ijaarkaaga baaskiilka waxaa laga goynayaa TL-kaaga koontadaada. Izmirimkart Haddii aad ku dhamaato TL koontadaada Bisim, waad ku wareejin kartaa TL bartaada xubintaada akoonkaaga, ama waad sii wadan kartaa howsha adoo akhrinaya tilmaamaha ku yaal shaashadda kiosk, ama waxaad TL ugu ridi kartaa koontadaada khadadkaaga.
Jadwalka Ujrada Bixinta BISIM
Laga soo bilaabo 01-11-2019, kharashka kirada baaskiil saacaddiiba £ 3.5'Dr.
Ma jiro wax lacag lagu wareejinayo markii la kireynayo kaarka xubinnimada Bisim.
30: 24: 00: XNUMX: Dhigashada deebaajiga XNUMX TL ee loogu talagalay kirada kaararka deynta waxaa lagu xalliyaa XNUMX. Haddii kale, la xiriir laanta bangigaaga.
Nidaamka baaskiilkeena caqliga leh 23: 00 - 06: 00 wuxuu ku xiran yahay kirada kaararka deynta.
Qodobbada Xubnaha Xubnaha BİSİM
Qiimaha kaarka xubnuhu waa 5 TL.
Kaadhkaaga ayaad ku ridi kartaa barta xubnaha. (Nidaamkeenu wuxuu la shaqeeyaa min. 3.5 TL.)
Kaadhkaaga waad ka gadin kartaa liiska macaamiisha xubinta.
* Konak İskele saacadaha furitaanka:
Isniinta 11: 00 15 00 15 30 18 45 XNUMX
Talaadada 11: 00 15 00 15 30 18 45 XNUMX
Arbacada 11: 00 15 00 15 30 18 45 XNUMX
Khamiista 11: 00 15 00 15 30 18 45 XNUMX
Jimcaha 11: 00 15 00 15 30 18 45 XNUMX
Sabtida 11: 00 15 00 15 30 18 45 XNUMX
Axadda 11: 00 15 00 15 30 18 45 XNUMX
Baaskiilkeena joogsiga ah ee ku shaqeynaya nidaamkeena baaskiil ee caqliga leh ee Bisim waxaa lagu muujiyey khariidadda cagaaran.
Khariiddada Izmir BISIM
Khariidadda İzmir BİSİM halkan Riix halkan